फेसबुक र इन्स्टामा कति समय बिताउने? अब आफैँ तय गर्न सकिने - प्रविधि - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालखबर साउन २०
फेसबुक र इन्स्टा
सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक गतिविधिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा होस् अथवा कामकै बेला फेसबुक र इन्स्टाग्राममा झुन्डिनेको संख्या विश्वमै ठूलो छ। सबैलाई थाहा छ। यसले हाम्रो महत्वपूर्ण समय बर्बाद गरिरहेछ। यसले मानसिक रुपमा असर गरेको थाहा पाए पनि याे लत छुटाउन सकिरहेका छैनौं।
अब फेसबुक र इन्स्टाग्रामले यी कुराहरुलाई मध्य नजर गर्दै चाँडै एक नयाँ फिचर आफ्नो एप्लिेकेसनमा समावेश गर्दैछन्। यो फिचरले प्रयोगकर्ताको बानीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ। सो फिचरको सहयोगमा फेसबुक र इन्स्टामा कति समय बिताउने भनेर तय गर्न सकिनेछ। याे फिचरले स्क्रोलिङ तथा सामाजिक सञ्जालमा कति समय बिताउने समय निश्चित गर्ने विकल्प दिनेछ।
१, २, ३ भनेर त्यहाँ विकल्पहरु राखिएका हुन्छन्। अथवा हामी आफैँले चाहिएको समय राख्न सकिनेछ। तय भएको समय सकिएसँगै हामीलाई नोटिफिकेसन मार्फत खबर आउनेछ। प्रयाेगकर्तालार्य त्याे नोटिफिकेसन बन्द गर्ने सुविधा पनि हुनेछ। केही समूहले याे फिचर खासै प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन्। अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिट्यूटले फेसबुक र इन्स्टाले ल्याउन लागेको यो फिचर ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताएको छ।
फेसबुक र इन्स्टामा यो सेवा कसरी सुचारु गर्ने ?
इन्स्टाग्राममा यस फिचरलाई सुचारु गर्न सेटिङमा गएर ‘योर एक्टिभिटी’ मा क्लिक गरेपछि आफूले त्यसमा आफ्नो समय तय गर्न सकिनेछ। यसैगरी फेसबुकमा यो फिचर प्रयोग गर्न सेटिङमा गई ‘योर टाइम अन फेसबुक’ क्लिक गरेपछि समय तय गर्न सकिनेछ। डिसेम्बर २०१७ मा फेसबुकले एक ब्लगमा धेरै समय सामाजिक चलाउँदा हुने बेफाइदाको वारेमा जानकारी दिएको थियो। त्यतिबेलै फेसबुकले यस प्रविधिको विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित २० साउन २०७५, आइतबार | 2018-08-05 12:25:38